Category Africa – Cayaaraha dunida
Janaayo, 06, 2018 Weeraryahanka u cayaara kooxda Liverpool ee Maxamed Saalax ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka ugu wanaagsan Africa. Abaalmarintan oo ay u tartamayeen dhowr ciyaartoy oo afrikaan ah ayaa aaqirkii waxaa ku guulaystay Maxamed Saalax oo horyaalka England ka dhaliyay 23 gool. Waxaa sidoo kale tartanka kula jiray Sadio Mane oo ay ka wada More...
16 03 2017 Madaxwayniha xiriirka kubada cagta Madagascar Ahmad ayaa loo doortay hogaanka cusub ee Confederation of African Football Madaxweynaheeda,waxaana uu soo afjaray muudo ninkii heestay Issa Hayatou kaasi More...
06 02 2017 Ciyaar u dhaxeysay xulalka qaramada Faraacida iyo Cameroon ayaa goor dhaweyd soo idlaatay waxayna guushu raacday xulka qaranka Cameroon. Natiijada ciyaarta ayaa kuso idlaatay 1-2 ay guushu ku raacday More...
26 06 2016 Waxaa lasoo Saaray isku aadka Wareega Gruubyada isreeb reebka koobka Aduunka ee qaarada Africa Waxaana isku soo beegmey dalalka Waa weyn. Isku aadka ayaa ka kooban 5 Gruub Waxaana koobka Aduunka aadi More...
Yaya Toure oo ku guuleystay Abaal-marinta BBC-da ee Cayaartoyda Afrika ee 2015-ka (SAWIRRO) .
Sabti, December 12, 2015 Laacibka Yaya Toure ayaa ku guulaystay in uu noqdo Cayaar-yahanka Kubadda Cagta Afrika ee sanadka 2015 ee BBC ay bixiso. Cayaaryahanka 32 jirka qadka dhexe uga cayaara xulka qaranka Ivory More...
22 04 2015 120- Daqiiqo oo la ciyaaray waxba waa la iska dhalin waayey waana la is mari waayey xulalka finalka usoo baxay ee Ghana iyo Ivory Coast labada kooxoodna waxay soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleystay More...
Rasmi: Dalka Gabon Oo Loo Doortay Inay Mari Galiyaan Tartamada Qaramada Afrika Ee Sanada 2017 Lagu Balansan Yahay .
22 04 2015 Xiriirka kubada cagta qaarada Afrika ayaa dalka Gabon u doorteen inuu marti galiyo tartanka qaramada Afrika ee sanada 2017 lagu balansan yahay. Gudiga fulinta sare ee qaarada Afrika ayaa ku kulmeen magaalada More...